ဥစ္စစောင့်  မလေး ကျမ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဥစ္စစောင့်  မလေး ကျမ
ဥစ္စစောင့်  မလေး ကျမ
Posted by မိုချို on May 15, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 30 comments
ဥစ္စစောင့်  ဇာတ်လမ်း
အံဇာတုံး က ဥစ္စစောင့် ဆိုလို့ အဖွားနဲ့ အမေပြန်ပြောပြတာတွေ သတိရမိတယ်။
ကျမ ငယ်ငယ်က စကားပြောတတ်ပြီး သိပ်မကြာခင်ပဲ ပေါက်ကရ တွေ လျောက်ပြောသတဲ့။ ဘယ်လို ပြောသလဲဆိုတော့ ကျမက အဖေတို့ တာဝန် ကျ တဲ့ ၊ ကျမ ကို ကိုယ်ဝန် စရှိ ခဲ့ တဲ့ ရွာနား က ဘုရားကြီး က လာတာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ ကျမမှာ မောင်ကြီးတွေ၊ ညီမလေးတွ ရှိပြီး ကျမက အလတ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျမတို့ ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ ဘိုးဘိုး ရှိကြောင်း ၊ လသာတဲ့ ညတွေဆို ပန်းတွေ စီထားတဲ့ နွယ်ဒန်းတွေ စီးကြကြောင်း ညီမတွေ ကို မောင်ကြီးတွေက လွှဲပေးကြောင်း တွေ၊ ဖေဖေမေမေတို့ ဘုရားကြီးလာတာတွေ့တော့ လိုက်ချင်လို့ အတင်း ထွက်ပြေးလာကြောင်း၊ မောင်ကြီးတွေက သဘောမတူပဲ ရိုက်နှက်ကြကြောင်း နဲ့ ခုတောင် ဒဏ်ရာရှိသေးကြောင်း ပြောပြီး ဘယ်ဘက် နား အနောက် ဘက် နားထင် ပေါ်က ဆံပင် မပေါက်ပဲ ပြောင် နေတဲ့ မွေးရာပါ အမှတ်ကို ပြ သတဲ့။ လကွယ်ည အားလုံးအိပ်ပျော် နေတဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်သူမှ မသိအောင် ထွက်ပြေး လာပါသတဲ့။
တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် ကျမရဲ့ မွေးနေ့က တန်ဆောင် မုန်း လကွယ်နေ့ ဖြစ်သလို ၊ ဆရာဝန် အဖေနဲ့ သူနာပြု အမေက ကျမကို ဂျူးဒိတ်ကနေ တဆင့် သန္ဓေ စတည်လောက်တဲ့ ရက်ကို ပြန်စစ်လိုက် တော့ လည်း လကွယ်နေ့ တရက်က အနီးစပ်ဆုံး တိုက်ဆိုင်နေပြန်တယ်။ ကျမကလည်း မောင်ကြီးတွေ ၊ နှမလေးတွေ ပါးစပ်ကမချပဲ၊ တယောက်တည်းလည်း စကားတွေ မကြာခဏ ပြောတတ်တော့ အဖေအမေရော၊ အဖိုးအဖွားတွေကော စိတ်ပူလာပြီ့း အဲတုန်းက နာမည် ကြီး ဆရာ တယောက် ဆီ ရောက် သွားပြီး သိုက်ကြိုး ဖြတ်ရပါသတဲ့။
အမေတို့ ၊အဖွားတို့ ပြန်ပြောပြတဲ့ ဆရာ့ရှေ့မှာ ဈေးဆစ် ကြတဲ့ အကြောင်းက စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီ ဆရာက ဘိုးဘိုး ဆိုသူနဲ့ မောင်ကြီး ဆိုသူကို သူ့ ရှေ့မှောက် ခ်ါလိုက်ပါတယ်တဲ့၊ ပရိတ်သတ် ထဲက တယောက်ကို မောင် ကြီး ဆိုသူမှ ၀င် ပူးပြီး ပြောတာက ၊ မောင်နှမ ၇ ယောက် ရှိပြီး သူက အကြီးဆုံး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယောက်ျာလေး ၃ယောက်က အကြီး ၊ မိန်းကလေး ၄ ယောက်ကအငယ် မှာ ကျမက မိန်းလေးထဲမှာ အကြီး ဆုံး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အကို အကြီး ဆုံး သူ က နှမ အကြီးဆုံး ကျမ ကိုအချစ်ဆုံး ဖြစ်ပါကြောင်း။ ဒါကြောင့် လူ့ ပြည်ကို ပေးမသွားလို ကြောင်း ၊ အခု ရောက်သွားပြီ ဆိုတော့ ဘယ်နှနှစ် ထိပဲ နေခွင့် ပြုနိုင် ကြောင်း ပြောတော့ ဆရာ က လူ့ ပြည်မှာပဲ ရတနာ သုံးပါး ရှိတဲ့ အတွက် ကုသိုလ် ကောင်းမှု ပြု လုပ်နိုင် ကြောင်း ၊ နှမ ကို အမှန်တကယ် ချစ်ရင် ကုသိုလ် ကောင်းမှု ပြု လုပ်နိုင် တဲ့ ၊ပိုပြီး မြင့်မြတ်တဲ့လူ့ ဘ၀မှာ ကုသိုလ်ကံ ရှိသလောက် နေထိုင် တာကို ခွင့်ပြုသင့် ကြောင်း ၊ မနှောက်ယှက် သင့်ကြောင်း ၊ ကိုယ်တိုင်လည်း အပါယ် ဘုံသားဘ၀ နှင့် မမွေ့ လျော် နေပဲ လွတ်မြောက် အောင် ကြိုးစားသင့်ကြောင်း တရားဟောပါသတဲ့။ အဲဒီ မှာတိုက် ဆိုင်တာ က ပူးပြီးပြော တာ တွေ နဲ့ ကျမ ပြောပြောနေ တာတွေ က တထပ်တည်း ကျ နေသလို အပူးခံရတဲ့ အမျိုးသမီး ကလည်း အမေတို့ နဲ့ လုံးဝ မသိတဲ့ အမေ တို့ လို ဧည့် သည် ပါပဲတဲ့။
အသက် ၂၅ မှာ တော် စစ်ယူ လိုက် ရပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျမကံ ရှိသလောက် အသက်ရှည် ခွင့် ရမယ်၊ ကျမမိဘတွေ နဲ့ ကျမ ကိုယ်တိုင် ကုသိုလ် ကောင်းမှု လုပ်ပြီးတိုင်း သူတို့ ကို မမေ့ မလျော့ အမျှဝေ ပါ့မယ်ဆိုတဲ့ ကျမတို့ ဘက်က ကတိနဲ့ ကျမရဲ့ ကံရှိသလောက် သက်တန်း တလျောက် ဘာ အနှောက်ယှက်မှ မပေးပါဘူး ဆိုတဲ့ ကတိ လဲလှယ်ခဲ့ကြတယ်။ ခေတ်ပညာတတ် ဆရာဝန် ဖြစ်တဲ့ အဖေ တောင် သမီးဇောနဲ့ အဲဒီ ဘုရားကို ပြန်သွားပြီး ဆရာ ခိုင်းတဲ့ အတိုင်း ပြဒါးပေါက်တာတွေ ခွင့်တောင်းတာတွေ လုပ်ခဲ့ရပါသတဲ့။ အဲဒီနောက် ကျမလည်း ပေါက်ကရတွေ မပြောတော့ ပဲ ၊ ကျန်းကျန်းမာမာ လန်းလန်းဆန်းဆန်း နဲ့ ပုံမှန် ကလေးတယောက် ဖြစ်သွားပါသတဲ့။ အမေတို့ ပြောလို့သာ သိခဲ့ရပေမယ့် ကာယကံရှင် ကျမကတာ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဇာတ်လမ်း တပုဒ်လို့ ပဲ ခံစားမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေ စိုးရိမ်တဲ့ အသက် ၂၅ နှစ်ပြည့် တုန်းကတော့ အမေ စိတ်ကျေ နပ်အောင်၊ ကိုယ်လည်း ၀တ်ချင်တာနဲ့ သီလရှင် ၉ ရက် ၀တ်ပြီး ဘ၀ ပြောင်းပေးလိုက်သေးတယ်။
ကျမသိတတ်စ တည်းက မိဘ၊ ဖိုးဖွားတွေက ဘုရားရှိခိုး ၊ ပုတီးစိတ် တတ်အောင်သင်ပေးပြီး ၊ ပြီးရင် မမေ့ မလျော့ အမျှဝေဖို့မှာထားတယ်။ ကျမလည်း ကုသိုလ်ကောင်းမှု လုပ်ပြီးတိုင်း၊ ဘုရားတွေ ဖူးပြီးတိုင်း၊ တရားစခန်းတွေ ၀င်ဖြစ်တိုင်း ဘ၀ ဟောင်းက အဆက်အနွယ်တွေကို အမျှဝေဖြစ်တယ်။ ကျမက ရတနာ ၃ပါး က လွဲလို့ နတ်တွေ ၊ ဘိုးတော် မယ်တော်တွေ လုံးဝ မကိုးကွယ်ပါဘူး။ နတ်စိမ်း တွေ ၊ ဥစ္စာစောင့် တွေဆိုတာ တကယ်တော့ အစွဲ အလမ်း ကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အပါယ် ဘုံသားတွေပါ။ သူတို့ ကို ကြောက်စရာ၊ ကိုးကွယ်စရာ လည်း မလို သလို၊ မထီမဲ့မြင် ပြုစရာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရှိနေတာကို တော့ အသိမှတ် ပြုပေးပြီး ကုသိုလ်ကောင်းမှု လုပ်တဲ့အချိန်မှာ မေတ္တာပို့ အမျှဝေပေးရင် ပြီးတာပါပဲ။
အမေတို့ ပြောပြ တဲ့ ကျမ ငယ်ငယ် က အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲ နိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။( ဆံပင် အရှည် မမြန်တဲ့ ကျမ အသက် ၂၅နှစ် လှတ ပတ အရွယ်မှာ ဂတုံးဆံပင်ပေါက်နဲ့ တော်တော်ကြာကြာ နေလိုက် ရပြီး ၂၆နှစ် မှာ မင်္ဂလာဆာင်တော့ ဆံပင်က ဆံထုံး ထုံး လို့ မရသေးလို့ ဆံပင် တု စွပ်ခဲ့ ရတာ တာ့ မှတ်မှတ် ရရ ပဲ။ တော်သေးတာပေါ့ မောင် ကြီးရယ် ယောက်ျား မယူရဘူးလို့ မမှာခဲ့ လို့….ဟီးးးဟီးးးး)
တော်သေးတာပေါ့ ၊ မင်္ဂလာဆောင်မှာမှ ဂတုံးကြီးနဲ့ ဆိုရင်တော့ ၊ မိုချို လေးယောက်ျားအစား ရင်မောမိမှာဘဲကွယ် ။ တစ်ကယ်ပါ ။ ဟီဟိ
အဟီး .. အစ်မရေ … ဆံပင်လေးရှည်အောင်တောင်စောင့်ပါဦးလား အစ်မရယ် … ။ အလွန်ဆုံးသုံးနှစ်လောက်ဆို ကိုယ့်ဆံပင်နဲ့ကိုယ် ဆံတုံးလုပ်လို့ ရပါပြီ .. ဟီး … ။
အစ်မရေ သိုက်ကလာတဲ့ လူတစ်ချို့ကို တွေ့ဖူးတယ် … ။ ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့လိုပဲ ပြောခံရဖူးတယ် .. ဘယ်သိုက်က ဘယ်သူက ပြန်ခေါ်မှာပေါ့နော် … ဒါမျိုးတွေလုပ် .. ဓါးထမ်းပြီး ကျော်ရတာလည်းကြားဖူးတယ် … ။ တစ်ခါတစ်လေကျလျှင် စိတ်နာတယ် … ။ သူများတွေ ဘ၀ပြောင်းလို့ ပျော်နေပြီကို … ။ ဒီဘ၀မရောက်ခင်ကတော့ … မရောက်အောင် မတားကြပဲ .. ဘ၀ပြောင်းသွားမှ .. ပြန်လာခေါ်ချင်တာတို့ .. လွမ်းလို့ .. ၀င်ပူးတာတို့နဲ့ .. တကယ့်ကိုအာရုံနော် … ။ အရင်ကတော့ .. သိုက်ဒါနတွေဘာတွေ သွားလုပ်ရတယ် … ။ ယုံတာ မယုံတာ အပထား … ပြန်ခေါ်လျှင်ပါသွားမှာလည်း စိုးတာကိုး … ။ နောက်ပိုင်း သိတတ်တဲ့ အရွယ်မှာတော့ … စိတ်ထဲ စွဲစွဲလမ်းလမ်းမရှိတော့ပါဘူး … ။ ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်ပုံပြင်တပုဒ်ကြုံခဲ့တယ်လို့ပဲ ကိုယ့်စိတ်ထဲ မှတ်ထားပါတယ် အစ်မရေ .. ။ ပြောမယ့်သာ ပြောတာ ..သိုက်အကြောင်းပြောလျှင် … ၂၅နှစ် ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုတာချည်းပဲ … သူတို့ လပ်ကီးဆဲဗမ်းသိပ်ကြိုက်တယ်ထင်တယ် .. ဟိဟိ ..
ဆံပင်ရှည်အောင် စောင့် တုံး သတို့ သား စိတ်ပြောင်း သွားမှာ စိုး လို့ ပါ နော်။
ဥစ္စာစောင့် နဲ့ သိရင် ရွှေတွေငွေတွေ ငှားဝတ်လို့ရတယ်ဆို ….
သများကတော့ ဒါတွေ မငှားချင်ပါဘူးအန်တီမိုချိုရယ်..
သများကို EOS EF lens L series အတိုအရှည်လေးဒွေ
နှစ်အစိတ်ပြည့်တာနဲ့ တရက် မဆိုင်းဘဲ ပြန်ပေးပါ့မယ်အေ…
အမေတို့ ပြောတဲ့ အိပ်၇ာဝင်ပုံပြင် ထဲမှာတော့ ဒီပုံပြင် က ကိုယ် တိုင် မင်းသမီး ဆိုတော့ နားထောင်လို့ ပိုကောင်းသား။
ချစ်ချစ်ကြီးကတော့ သူတို့ သမီး ကို ဂတုံးကြီးဆို လည်း ယူမှာပဲတဲ့ ကပေ ရဲ့။
အမကတော့ Lens ဆိုရင် ငယ်တုန်းက ရောင်စုံ စက္ကူတွေထည့်ပြီးကြည့် ရတဲ့မှန် ပြောင်းကြီးပဲ သိသဟဲ့။
အရင်ကတော့ ချောချောလှလှ မိန်းကလေးတိုင်း သိုက်ကလာကြလို့
အစောင့် အကိုတော် အမတော်တွေရဲ့ စည်းကမ်းဖျက်မိလို့ (သတိပေးခံရသလိုပေါ့လေ)
အနှောက်အယှက်ကြောင့် သိုက်ဆက်ဖြတ်ရတာတွေ ရှိခဲ့တယ်…
ခုခေတ်မှာတော့ မယုံကြည်သူတွေ များလာလို့ထင်ရဲ့ ဥစ္စာစောင့် ၀င်စားသူများအကြောင်း
မမိုးချိုရေ.. ဥစ္စာစောင့် အကြောင်း ပြောရင် ပြောစရာတွေ တပုံ တပင် ရှိတယ်။ အခုအချိန်မှာ ဒါတွေ ပြောဖို့ မလိုအပ်တော့ဘူး။ ကိုယ်သာ သီလ သမာဓိ ရှိပါစေ.. သူတို့ ပြန်ခေါ်ဖို့ မပြောနဲ့ ကိုယ်က လက်ဖျောက် တချက်တီး သူတို့ဆီမှာ မိုးကြိုး အဆင်း ပေါင်းများစွာ ကျသွားစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ခံအား ရှိအောင်သာ လုပ်ပါ။ တခြား ကိစ္စတွေ စိတ်တွေ မယိမ်းယိုင်ပါစေနဲ့နော်။
ဥစ္စာစောင့်တွေ က လူတွေနဲ့နီးစပ်တော့ လူဘ၀မှာလူပြန်ဖြစ်တာ များတယ်လို့ကြားဖူးတယ်ဗျ …
ဟိုကောင်မလေးက သိုက်ကလာတာ..ဒီတစ်ယောက်ကသိုက်ကလာတာနဲ့ ခဏခဏကြားဖူးနေတယ်…
ဘုရားတရားလုပ်ဖို့ လူ့ပြည်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဆိုပဲ ..နားတော့မလည်ပါဘူးး
အဲ သိုက်ကလာတာ ယောကျာ်းလေးတွေသိပ်မတွေ့ဘူးနော်..:D
ကိုနိုဇိုမီကပြောတယ် ရွာထဲမှာ ဥစ္စာမလေးတွေရှိတယ်တဲ့ ဒါဆိုမမိုချိုလားမသိ အဟီးးးးးးးးးးးးး………..
မမိုရေ အားပေးသွားတယ်နော် ………..
မာရီလင် မွန်ရိုး ၊ ဘရစ်တနီမာဖီ ၊ ၀ှစ်တနီဟူစတန် တို့လည်း သိုက်ကလာတာဗျ…
အဲ .. ပြန်ခေါ်သွားတာကြည့်ပါလား ..။
အဲ့လိဇဘက် တေလာကြီးကတော့ သိုက်ကြိုးဖြတ်တာ အောင်မြင်သွားလို့
သက်တမ်းစေ့အောင် နေသွားရတယ် ..တဲ့ ။
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် ကတော့ မပြတ်တပြတ် ဖြစ်သွားလို့ ၄၀ကျော်ထိ ခံသွားကြောင်း
ကျမ ကတော့ ပုံပြင် တပုဒ်ထက် ပိုပြီး မခံစားမိပါဘူး ။ မိဘတွေအနေ နဲ့ ကတော့ ကိုယ့် သားသမီး အတွက် ဆိုတော့ စိတ်ပူပန် မိကြမှာ မဆန်းပါဘူး။ ကျမအနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာ သာကို သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ အတွက် ဥာဏ်နဲ့ ယှဉ်တဲ့ ကံ၊ ကံ၏ အကျိုး ကိုပဲ လက်ခံယုံကြည် ပါတယ်။
သိုက်ကြောဖြတ်ချင်သော သိုက်မှလာသော သိုက်သမားများ အနေဖြင့် သိုက်ဖြတ်လိုပါက သိုက်ဖြတ်ဆရာ သိုက်ဗိုက်ကလေးကို
ဦးဆုံးလာဖြတ်သူ ဆယ်ဦးအား ဆယ်ဘ၀စာ ဘွတ်ကင်သိုက်ဖြတ်စနစ်ဖြင့် ဖြတ်ပေးပါမည်။
နောက်မှလာသူများအား တစ်ဘ၀စာသာ ဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာဒီလိုဇာတ်လမ်းတွေတော်တော်ကြားရပါတယ်။ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တွေမို့ မယုံလို့လဲမရ ပါဘူး။ မျက်စိရှေ့တင်ပြောကြငိုကြ တောင်းပန်ကြတွေလဲတွေ့ဖူးပါတယ်။ တခါတခါပေါ့လေ စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ ဘာသာခြားတွေမှာတော့ဒါမျိုးမရှိဘူး။ နိုင်ငံခြားတွေမှာ လဲမကြားဖူးဘူးပေါ့နော်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတခုထဲမှာပဲ ရှိနေတာထူးဆန်းတယ်လို့တော့ထင်မိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဒီဘက်ခေတ်အထိရှိနေတုန်းပါပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လကပဲ အဲလိုအဖြစ်မျိုးကြုံရပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ၁၉ နှစ်အရွယ်ကောင်မလေး ( အသိတယောက်ကို ) သိုက်ကပြန်ခေါ်သွား တယ်ဆိုပြီးသိလိုက် ရပါတယ်။ တော်တော်တော့ထူးဆန်းပါတယ်။ မယုံလို့လဲမရပါဘူး။ နားလည်ရခက်တဲ့ဘာသာရပ်တခုပါပဲ။
အမှတ်တရ အနေနဲ့သာပြန်ရေးပြတာပါ။ ကျမကိုယ်တိုင် ကို ခုနေခါ ဆရာ တယာက်ယောက်က သိုက်က လာတာမို့ လို့ ပြန်မခေါ်အောင် လုပ်ပေးမယ် ဘာညာဆိုရင် လုပ်ြဖစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကုန်မဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ တကိုယ်လုံး check up လုပ်ပစ်လိုက်မယ်။ ပြောမယ့်သာပြောသာ ဗေဒင်တွေ၊ အကြားမြင်တွေဆိုရင် ၉တန်း/၁၀တန်းတုန်းက အပျော် မေးဖူးတာက လွဲလို့ ၀ါသနာ မပါလို့ မမေး ဖြစ်ဖူးရယ်။ ချစ်ချစ်ကြီးကတော့ ကျမထက်စာရင် နည်းနည်း စိတ်ဝင်စားတယ်၊ ဘုရားတွေ မှာ တခါတလေ ၀င်မေးလေ့ ရှိတယ်။ ယတြာတွေ ဘာတွေတော့ တကူးတက မချေဖြစ်ပါဘူး။
ရတနာ ၃ ပါးကိုယုံကြည် ဆည်းကပ် ပေမယ့် ဘာ ဘုရားမှ၊ ဘယ် ဘုန်းကြီးမှ ဆိုတဲ့ အစွဲတော့ မရှိပါဘူး ရဟန်းအလုပ် မလုပ်တဲ့ ရဟန်းတွေ ဆို ဝေးဝေးရှောင်ပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာ သာ ပီပီ ကိုယ့် ကို ကိုယ် အစွန်းမရောက် အောင် နေပါတယ်။
သိုက်ဆိုလို သတိရတယ် .. နိုင်ငံခြားမှာ စိန်တွင်းတွေတူးပြီး .. သောက်ရမ်းချမ်းသာသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဗျ
သိုက်ဆိုတာ ရတနာတွေ အများကြီးရှိတဲ့နေရာဘဲ ..
သတင်းတပုဒ် ခုလေးဘဲဖတ်လိုက်ရပါတယ် …………………………….
သိုက်မှာရှိတဲ့ရတနာ (ငွေပမာဏ) >တူးရတဲ့ ကုန်ကျငွေ + အခြားသော risk ကြောင့်ကုန်ကျငွေ + အစိုးရကိုပေးရသောငွေ
ရှိသော သိုက်ကို သတင်းပေးနိုင်ပါက သတင်းပေးသူကို အသားတင်အမြတ် ထဲမှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ပေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ..
သတင်းတပုဒ် ကြားမိလိုက်ပါတယ် .. ဟီး .. အနော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် သတင်တပုဒ်ကြားဖူးတာပြောတာ
ဖားကန့်သိုက်ကတော့ ပြောင်သလင်းခါသလောက်ရှိသွား ပြီ၊ မိုးကုတ်သိုက်လည်း တာ့တာပြနေပြီ ..
ခုခောတ် သိုက်တွေက .. ရွှေငွေရတနာတွေ မထွက်ဘူးဗျ .. သူတို့ကို သိုက်စောင့်နတ်တွေက အခိုးအငွေ့ အဖြစ်ပြောင်း ထားတာ တချို့က မည်းမည်းအရည်တွေ အနေနဲ့ပေါ့ ..
ပြီးတော့ တချို့ သိုက်စောင့်နတ်တွေကလည်း တယ်ဆိုးတယ်ကိုးဗျ .. ရိုးရိုး လေးသွားယူရင်မရဘူး .. အစွမ်းအလွန်ထက်တဲ့ အရာတွေနဲ့ တူးမှရတာ .. ဒါကြောင့်လည်း မြန်မာနိုငငံကသိုက်တွေကို တရုတ်က ယူလိုက်၊ အိန္ဒိယက ယူလိုက်နဲ့ .. ဘာဖြစ်ဆို မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲ့လောက် တန်ခိုးရှိတဲ့ အရာကို ဘယ်သူက မှ မထိန်းချုပ်နိုင်သေးဘူးလေ .. ဒါကြောင့်လည်း မီးပျက်နေတာပေါ့ .. ဟီး ..
ခုလည်း ရခိုင်ဘက်က သိုက်ကြီးလေး တရုတ်ဆီပါသွားတော့မယ် ပိုက်လိုင်းတွေဆက်နေပြီ .. (တွေးမိတွေးရာရေးမိ ခြင်း .. )
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက အမေ့ရဲ့အမ အဒေါ်က နတ်အရမ်းယုံတော့ သူ့အိမ်မှာ
နတ်နန်းနဲ့ဘိုးတော်ကိုပါအိမ်ခေါ်တင်ထားတာလေ။ တဂျိန်းဂျိန်းနဲ့ နတ်ပူးတာ အတော်ဝါသနာပါတာ။ လာ
သမျှလူကိုလည်း သိုက်ဆက်ရှိတယ်လို့ ပြောလေရဲ့။ ကျွန်မတို့တောင် သိုက်ဆက်တွေတဲ့။
တစ်နေ့တော့ “ လိပ်ပြာလှတဲ့သူကို နတ်ဝင်တယ်တဲ့ဆိုပြီး လက်အုပ်ချီခိုင်းပြီး နတ်ဝင်စေပါတယ်” အဟီးး
လက်အုပ်ချီ မျက်လုံးမှိတ်ပြီး စိတ်ထဲကလည်းအရမ်းကိုရယ်ချင်နေတာ အောင့်ထားရတယ်။ နောက်ဆုံး
ဘယ်လိုပဲလုပ်လုပ် ဘာနတ်မှမ၀င်လို့ အဒေါ်ကတော့ လက်မြောက်အရှုံးပေးသွားတယ်။
အဲတော့ လိပ်ပြာမလှဘူးပေါ့နော်……….။ အခုတော့ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ရပ်ပြီး ကိုယ့်ဘ၀တည်ဆောက်
တဲ့အခါမှာတော့ ဘုရားကလွဲလို့ ဘာနတ်မှမကိုးကွယ်ပါဘူး။ အိမ်တွင်းတောင်မရှိဘူး။ မယုံတာတော့ မဟုတ်
ဘယ်သူမှ သက်သေ မပြနိုင်သေးသလို မရှိဘူးလို့လဲ သက်သေမပြနိုင်သေးတဲ့
အန်တီ မိုးချိုကလည်း ဆံပင်လေး ရှည်အောင်တောင် စောင့်ဘူးနော် ..
သူကလည်း ဇွတ် …
အန်တီမိုးချိုရဲ့ ငယ်ငယ်က အကြောင်းကလည်း
တော်တော် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်ဗျ ..
အားပေးသွားပါတယ် ခင်ဗျာ ..
အဲဒီဝင်စားသူကို သိုက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ တန်ခိုးအသင့်အတင့်ရှိတဲ့ ပရလောကသားတွေက သိုက်ကို ပြန်ခေါ်ဘို့ သတ်ပစ်တယ် ဆိုပါစို့…
အဲဒီသိုက်ကလာတဲ့သူသေရင် သူ့သိုက်ကို ကျိန်းသေပြန်ရောက်ပါ့မလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာနော်…။
ကုသိုလ်တွေများလို့ နတ်လဲ ဖြစ်သွားနိုင်တာပဲ
အကုသိုလ်တွေများလို့ အခြားအပါယ်ဘ၀တွေလဲ ဖြစ်သွားနိုင်တာပဲလေ..။
ဒါလည်း ဟုတ်တာပဲ ဘယ်သွားရမှန်းသိမှာ မဟုတ်ဖူး။
မယူရဘူးများဆိုရင်တော့ မိုချိုတော့ တေပြီဆရာဘဲ။
လျှောက် လျှောက် မင်းတို့လမ်း မင်းတို့ရွေးပြီး ကိုယ်တိုင်
ှသြော် .. အခုတော့ စိတ်မပူရတော့ဘူးပေါ့နော် .. စင်ကြာပူရောက်နေပြီဆိုတော့ .. လာခေါ်မဲ့ မောင်ကြီး ပြည်ဝင်ခွင့် ရမယ် မထင်ဘူး .. စိတ်အေးရပြီပေါ့ …. :grin:
ဦးဦးပါလေရာပြောတာ မှန်ပါတယ်။ ၃၁ ဘုံ ဆိုတာ အကျယ် ကြီးပါ။ အဲဒီမှာမှ အပါယ် ၄ ဘုံ မှာ ပိုမျုားပါလိမ့်မယ်။ ကျမတို့ မြင်နိုင်တဲ့ တိရိစ္ဆန် ဘုံ ကိုပဲ ကြည့်လိုက် ပါဦး။အများမှ အများကြီးပါ။ ဒါကြောင့် ဘ၀၂ခု တထပ်တည်း ပြန်ရဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။
ဟုတ်၏.. သဂျီးနဲ့ ကိုဘေးနွား၊ ကိုဘေးနွားနဲ့ သဂျီး ဒီလိုပဲ သံသရာလည်နေဒယ်
အနော်တို့ ရှက်ကီသိုက်ကျတော့ ဘယ်သူမှ သိုက်ကြိုး(သောက်ကြိုး) မဖြတ်ပေးကြပါလားဝေ….
အမမိုချိုက မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက အချိန်လေးပြန်သတိရသွားတယ်ပေါ့။